Nifety ny Malagasy : Feno avokoa ny tranombarotra rehetra -
AccueilRaharaham-pirenenaNifety ny Malagasy : Feno avokoa ny tranombarotra rehetra
Ao anatin’ny fety tanteraka ny vahoaka malagasy amin’izao fotoana izao. Tsikaritra izany amin’ny fahamaroan’ny olona mifamezivezy eran’ny tanàna, mijery izay hahafinaritra ny fetin’ny tsirairay avy. Eo koa ny fahitana ireo kilalao, akanjo ary akoho amam-borona mirantina manerana ireo tsena eto an-drenivohitra. Raha ho an’ny tsenan’ny krismasy, ohatra, dia nanana safidy be dia be ny mponinan’ Antananarivo nijerena izay ilaina. Nisy ireo nisafidy ireny tsena voatokana ho an’ny fankalazana ny fetin’ny krismasy, toa ny braderie, foir’fouille tetsy amin’ny village Voire Andohatapenaka…. nividianana kilalao sy akanjo. Eo koa ireo nisafidy ireo fivarotana lehibe. Fa eo koa ireo nianona tamin’ireo mpivarotra eny amin’ny sisin-dalana izay tena feno tokoa manomboka avy eny Analakely, ary mipaka hatreny Behoririka. Fa ny tsikaritra, dia nilaharana avokoa ny tranombarotra rehetra izay nandalovana teto an-drenivohitra. Midika izany fa manana ny fahefa-mividy entina hiatrehana ny fety ny Malagasy. Tsy mifidy sokajin’olona mantsy ny fidirana anaty tranombarotra fa nahitana ny sarangan’olona samihafa avokoa.
Na mpivarotra enta-madinika izany, na ireo mpivarotra ambongadiny, eny hatramin’ireo tsena lehibe aza. Isan’ireo tsena betsaka mpividy ihany koa mialohan’ny fetin’ny krismasy iny ny tsenan’ny akoho amam-borona. Raha ho an’ Ambodinisotry sy manodidina ny 67ha iny, dia tsy nahitana fiakarana be raha oharina amin’ny andavanandro ny vidin’ny gisa, gana, ary ny akoho. Izay tsy nijanona teo amin’ny 50 000 Ariary teo ny gisa. Ny vorontsiloza no nahitana fiakarana be, izay manodidina ny 100 000 Ariary miady varotra eo. Saingy tsy nahasakana ny olona ny fahalafosan’ny akoho amam-borona, fa lany avokoa ireo biby fiompy tena an-tsena.
Ao anatin’ny fankalazana ny fetin’ny krismasy izay hatrany, dia hita tokoa fa samy nanao izay ho afany ny mpiara-monina, ary niavaka tanteraka iny fety iny tamin’ity taona ity. Ankoatra ireo olona tsy nanana fahefana niantsena, dia tsy nitazam-potsiny ireo olona manana ny omena fa nisy ny fijerena manokana ireo sahirana mialohan’ny krismasy tamin’ny fanomezana kilalao, vatomamy, “biscuit” ireo zaza sahirana sy vary sy laoka ho an’ny ray aman-dreny. Ankoatra ireo fikambanana isan-karazany, dia isan’ny nanolotra fanampiana ireo sahirana ihany koa ny vadin’ny Filoham-pirenena amin’ny maha- renin’ny Malagasy azy. Samy nahazo ny anjara tandrify azy noho izany ny tsirairay nentina niatrika ny fetin’ny krismasy. Vory lanona avokoa ny fianakaviana iray manontolo niara-nisakafo sy niara-nifety. Ho an’ireo manana zazakely ihany koa, dia feno hipoka ny toerana filalaovana sy fampifaliana ny ankizy kely. Tena feno hipoka koa ny fiangonana rehetra nanomboka ny sasakalin’ny Noely ny 24 desambra, nitsenana ny fahaterahan’ny Tompo hatramin’ny fotoam-pivavahana ny 25 desambra, nankalazana ny andro nahaterahan’i kristy. Raha fintinina, noho izany, dia tao anatin’ny fitoniana tanteraka no nankalazan’ny olona ny 25 desambra, satria fetin’ny kristianina ny krismasy.
Mandalo eto Madagasikara, amin’izao fotoana izao, ny delegasiona avy amin’i Japon tarihin’ny minisitry ny Fotodrafitrasa sy ny Fitaterana ary ny Fizahantany (MLIT), Shinsuke Suematsu, ahitana mpamatsy vola sy solontenan’orinasa maro. Notanterahina omaly, araka izany, teny ...Tohiny
TAFA-PIFIDIANANA : Andriamorasata Solo Norbert,28 – Dama Zafimahaleo – Jean Ravelonarivo